मौसमी समाचार (ब्यङ्य)
६ जुन २०१४, हङकङ
१- धन्न बुढीले चाल पाएन
होइन के भयो र ब्रो त्यस्तो भनेर सोधेको थिए । अस्ति नेपाल बाट आएको कलाकारलाई घुमाउन जादा के किनी दिउँ तिमीलाई भनेको थिए । त्यो बेला अहिले पर्दैन दाजु पछी म नेपाल फर्कने बेलामा हजुरलाई सुटुक्क भन्छु ल भनेकी थिइन् । अस्ति फोन गरेर म त यो शनिबार नेपाल फर्कदै छु दाजु हजुरले मलाई किनिदिन्छु भन्नु भएको होइन भन्छ बा । मेरो पालो ल के किनी दिउँ भनेको त अरु त सबैले उपहार दिनुभएको छ । मलाई एक्दम मन पर्ने एउटा जुत्ता छ । त्यो किनिदिनु न ल भनिन् ।मेरो पालो ल आउ भनेर उस्लाई लगेर एउटा जुत्ता किनिदिए ।
जुत्ता उस्ले लग्यो तर बिल मेरो वालेटमै राखेको थिए । अस्ति त ब्रो मेरो बुढीले वालेट झिकेर बुढो सङ्ग पैसा कति छ भनेर हेर्यो । ठ्याकै त्यो बहिनीलाई किनी दिएको जुत्ताको बिल हेरेर यो के को बिल हो ? भनेर मलाई सोध्यो । मैले त्यो जुत्ताको बिल हो भने । अनि खोइ त जुत्ता ? यहाँ घरमा त नयाँ जुत्तै देख्दिन बिल मात्र छ भनिन् । मेरो पालो के भनु के नभनु भयो । झट्टै सोचेर हेत्तेरिका बुढी त्यो जुत्ता किनेको थिए बेलुका साथीहरु संग डिनर खाएर घर फर्कदा तेक्सीमै छोडेछु यार बुढी भनेर छाक्काए ब्रो भनेर भन्नु भएको थियो ।
मैले त्यो ब्रोलाई हेत्तेरिका तपाइले त दिदिलाई आखा झिम्मिक्कको ताल मै झुक्काउनु हुँदो रहेछ भनेको हा हा हा हा तरिका हुनु पर्छ ब्रो भनेर हास्नु भयो । कति डलरको जुत्ता किनिदिनु भयो होला? भनेर मलाई जान्न मन लागेर आयो । नेपाल बाट आउने कलाकारलाई कतिको जुत्ता किनीदिनु भयो भनेर सोधेको थिए । धेरै त होइन जम्मा एक दिनको तलब ९५० डलर पर्यो रे ।
जे होस हाम्रो ब्रो ले झन्डै नेपाली १३ हजार रुपैयाको जुत्ता उपहार दिनु भएछ । कसैलाई उपहार दिने रहर हुँदा हुँदै घर कि बुढीलाई ढाटेरै भए पनि उपहार दिए हाम्रो ब्रो ले । अव यो कुरा हङकङका संघ सस्थाहरुले थाहा पाए भने समाजसेवी भनेर खादा र सम्मान पत्रले सम्मान गर्ने बेर छैन । हङकङमा धेरै संघ सस्थाहरु छन् माखो मारेको थाहा हुनुहुदैन गलामा खादा आइहाल्छ ।
२- डाडा घरे ठुल्दाइले खत्तम पारेछ
नेपालमा छोरा छोरीलाइ अर्काको भरमा राख्दा लालन पालन राम्रो भएन भनेर डाँडा घरे भाउजु आफै बसेर हेर्छु भनेर नेपाल जानु भएको झन्डै दुइ बर्ष भएको थियो । दुई बर्षको अन्तरालमा यहाँ ठुल्दाइको बैस चढेर प्रतेक आइतबार झिलिमिली भैरहेको थियो । उस्को जिवनमा यौवनका पालुवाहरु पलाएर ठुल्दाइ प्रतेक आइतबार ब्यास्त । प्राय आइतबारहरुमा नेपाल बाट भाउजुले फोन गर्दा म काममा बिजी छु फोन राख बोस्ले हेर्दै छ भन्दो रहेछ । पहिले बुढा बुढी सङै हङकङमा हुँदा जहिले पनि आइतबार छुत्ती बस्ने बुढो आज भोली जहिले पनि काममा मात्र छु भन्ने। बुढोको चालामाला ठिक छैन भनेर फेरि भाउजु हङकङ आउनु भएछ । भाउजु हङकङ आउनु भएको पहिलो हप्तामा नै आफ्नो बुढो सन्डे बिजी छु । फोन राख बोसले हेर्दै छ । म भरे फोन गर्छु तिमीलाई भन्ने कारण पत्ता लगाउन सफल हुनु भएछ ।त्यो पनि दाइको मोबाइलको म्यासेज द्वारा । त्यो
म्यासेजमा एउटा गीत लेखिएको थियो रे दाइको लागी ।
तिमीलाई सन्चो छैन भन्ने थाहा पाए मैले
भेट्न आउने मन त थियो बाटै छैन अहिले
अब भाउजु आउनु भए पछि कसरी भेट्न आउन मिल्छ होइन ? भेट्न आउने बाटो नै बन्द गरिदिनु भयो भाउजुले । तपाईहरु पनि होस गर्नोस है यसरी भेट्न आउनेहरु तपाईहरु कै अगाडी पछाडी हिडिरहेको त छैन ?
यो कुरा थाहा पाएर मैले डाँडा घरे ठुल्दाइलाई भेत्दा सोधेको थिए । दाई तपाईलाई भेट्न आउने मन त थियो बाटै छैन अहिले भन्ने मान्छे को हो ? भनेको त स्वयमसेवक पो हो भन्नु भयो बुढो ले ।
एउटा कम्पनीमा धेरै नेपालीहरु संगै काम गर्दा रहेछन् । तिनीहरु मध्यका एक जना निक्कै छट्टु दाई हुनुहुदो रहेछ । काममा सबै साथीभाईहरुले वहाँलाई "छट्टु " नामले सम्बोधन गर्दा रहेछन् । किन भने वहाँले अहिले सम्म १० ओटा मोबाइल उपाहर दिएर ११ ओटा मोबाइल किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ भनेर वहाँ संगै काम गर्ने वहाँकै साथीले बसमा यात्रा गर्ने क्रममा आफ्ना साथी भाईहरुलाई सुनाएका थिए । म पनि बस यात्राको क्रममा उनिहरुकै पछाडी बसेर समाचार पढ्न तल्लिन थिए तर यो प्रसङ्गले मेरो कान चनाखो बनाएको थियो । तपाईहरुलाई वहाँले मोबाईल कस्लाई किनिदियो होला भन्ने कौतुहल मनमा लागेको हुनु पर्दछ ।
त्यतीको धेरै मोबाइल सायद आफ्नो आमा-बाबा ,सायद आफ्नो दाज्यु-भाउजु, दिदि-भेना, भाई-बुहारी या साली-सालो अथवा आफ्नै श्रीमतीलाई किनेको होला भन्नु भयो होला तर त्यसो होइन है । त्यो छ्ट्टुले अहिले सम्म आफ्नो गर्लफ्रेन्डहरुको निम्ती उपहार स्वरुप दिएको मोबाईल १० ओटा पुगेको साथीहरुलाई गर्बका साथ भन्नु हुन्छ भनेर सुन्न आएको छ । एउटा नयाँ गर्लफ्रेन्ड बनाउना साथ एउटा बजारमा चलेको नयाँ स्मार्ट फोन किनिदिने वहाँको बिशेषता नै बनेको छ । वहाँले मातेको बेलामा पैसा कमाएर आखिर मरिलानु के छ र अहिले सम्म मधेसमा एक बिघा खेत आउने पैसा उनीहरुको संगत गर्दा खर्च भएको र १० ओटा मोबाइल उपाहर दिइसकेको कुरा भन्नु हुन्छ भनेर वहाँ संगै काम गर्ने साथीहरु बिच बेला बेलामा चर्चा चल्ने गर्दो रहेछ ।
आफ्नो श्रीमती सोझो हुनुको फाइदा आइतबार ओभरटाइम छ भन्दै घरबाट झोला बोकेर निस्केर श्रीमतीलाई थाङ्नामा सुताएर गर्नु गरेछन् ।